14-KA MAARSO 2019-KA HALKAAN KA ARISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADUSGU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH KHAMIIS 15-KA MAARSO 2019-KA
Thursday March 14, 2019 - 22:17:03 in Wararka by Mogadishu Times
COL. CAARRE OO SHEEGAY IN UU QABTAY WASIIRKA GAASHAANDHIGA SOMALILAND KUNA DHAWAAQAY Col. Siciid Cawil Jaamac oo loo yaqaano (Caarre), isla markaana hoggaamiya jabhadda la'dagaallanta Somaliland ee ku sugan magaalada Qardho ayaa Garoowe m
COL. CAARRE OO SHEEGAY IN UU QABTAY WASIIRKA GAASHAANDHIGA SOMALILAND KUNA DHAWAAQAY Col. Siciid Cawil Jaamac oo loo yaqaano (Caarre), isla markaana hoggaamiya jabhadda la'dagaallanta Somaliland ee ku sugan magaalada Qardho ayaa Garoowe markale kaga dhawaaqay dagaal ka dhan ah Soomaaliland, xilli uu isaga horay uga tirsanaan jiray sara akiishooda. Shir Jar'iid uu ku qabtay Magalada Garoowe ayuu ku sheegay in isaga oo garab ka helaya Maamulka Puntland uu daga al xoogan ku qaadi doono deegaano ka tirsan Gobolka Sanaag oo Soomaaliland dhawaan ciidamo geysay,waxaana uu sigaar ah u sheegay magaalada Ceerigaabo. Isaga oo sii hadyay ayuu sidoo kale sheegay in dhawaan uu gacanta ku dhigay Wasiirka Gaashaandhigga Sooma aliland, hayeeshee u kusii daayay ehelnimo isaga oo ka jawaabayay Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliland oo dhawaan sheegay in Col. Caarre lasoo qaban doono. Col. Siciid Cawil Jaamac oo loo yaqaano (Caarre ayaa horay uga mid ahaa saraakiisha sar sare ee Ciidamada Soomaaliland, hayeeshee isaga soo baxay, isaga oo ku dhawaaqay jabhad la magac baxday dib u xureynta Soomaaliland.
BOQOL CARRUUR OO KU HOOS XAYIRAN BURBURKA DHISMO DUGSI KU YAALLA NIGERIA
Dhismo Dugsi Hoose oo ku yaalla magaalladda Laagoos ee dalkaasi ayaa la sheegay inuu soo dumay, waxaana laga cabsi qabo inay boqol Arday iyo dad kale ku hoos xaniban yihiin burburka Dhismahaasi.
Kooxaha Gurmadka ayaa la sheegay inay weli ku hawlan yihiin sidii loo soo badbaadin lahaa dadka ku hoos xaniban Dhismaha Dugsiga oo ka koobnaa 3 dabaq.
Afhayeenka Hay’adda Maaraynta Masiib ooyinka ee dalkaasi, Sani Datti oo la ha dlay Wakaalladda Wararka AP ayaa shee gay inay Saraakiisha iyo kooxaha gurmad ka ku hawlan yihiin sidii dad nool looga soo saari lahaa burburka dhisma haasi.
ILHAAN OMAR OO SI KULUL U NAQDISAY SACUUDIGA IYO MAREYKANKA
Labada Haweenka Muslimka ee ka tirsan Kongareeska Maraykanka ee Ilhaan Cumar oo asal ahaan Somali ah iyo Rashida Talayba ee asal ahaan Falastiiniyad ah, waxay si kulul u dhaliileen Hubka ay Maraykanka siiyaan Sacuudiga ee loo adeegsanayo dagaalka ka socda dalka Yemen.
Qoraal ay Ilhan Omar soo dhigtay barteeda Twitterka waxay ku sheegtay inay Sacuudiga had iyo jeer heerka ugu xun ku jiraan Tacadiyadda Xuquuqda Aadanaha ee Caalamka, isla markaana ay mas’uul ka yihiin macluusha iyo cuddurka Koleeraha ee dadka Reer Yemen.
Waxay sii raacisay inay Sacuudiga weli yihiin kuwa ugu sarreeya ee iibsada hubka lagu farsameeyo Maraykanka, waxayna Ilhan Omar isweydiisay sababaha uu Madaxweyne Donald Trump ula dhinac noqday kuwa hubka soo saara ee ka dhanka ah dadka u ololeeya Xuquuqda Aadanaha.
Hadalkeeda waxa uu ku soo beegmay iyadoo ay Mudanayaasha Aqalka Sen edka Maraykanka xalay yeelan doonaan Kulan ay kaga doodayaan Tacadiyadda ay Isbahaysiga Sacuudiga ka geystaan dalka Yemen iyo sidii loo joojin lahaa hubka laga iibiyo.
Bishii la soo dhaafay, Aqalka Senedka ee dalkaasi waxay u codeeyeen qaraar ku baaqay inay Maraykanka joojiyaan taageeradda dagaalka ee ay Isbahaysiga Sacuudiga ka siiyaan dagaalka Yemen.
Si kastaba ha ahaatee, Sacuudiga waxay tan iyo sannadkii 2015kii hoggaa miyeen Isbahaysi Carbeed oo ka dhan ah Maleeshiyadda Xuutiyiinta Yemen ee Iiraan taageerto.
DIBLUMAASI U DHASHAY DALKA QADAR OO KU TILMAAMAY INUU YAHAY ADDOON MUWAADIN SOOMAALI AH
Diblumaasi u dhashay dalka Qadar oo ka howlgala safaarada dowlada Qadar ay ku leedahay dalka Ingiriiska ayaa ku tilmaamay muwaadin Soomaliyed oo haysta dhalshada Britain addoon.
Maxamuud Axmed oo ah muwaadin asalkiisu yahay Soomaali ayaa u ahaa darawal Cabdulahi Cai AlAnsari oo ah diblumaasi u dhashay dalka Qadar madaxna ka ah qeybta caafimaadka ee safaarada Qadar magaalada London.
Hase yeeshee mudadii uu u shaqeynayay ayuu waxaa loola dhaqmay Maxamuud Axmed oo ah 79 jir siyaabo aadanimada ka baxsan waxana uu haatan dacwad u gudbiyay maxkamad ku taal magaalada London.
Maxamuud Axmed oo sidoo kale ka ahaa safaarada Qadar ee dalka Britain ayaa shaqeyn jirey 24 saacadood 7 maalmood sida ay daabacday jariirada the telegraph.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in muwaadinkan Soomaaliyeed la isku dayay in la siiyo lacag laaluush ah oo gaareysa konton kun oo Yuro ah si uu uga laabto dacwada.
Maxamuud Axmed ayaa shaqadii uu ka hayay safaarada Qadar ee London ayaa intii uu ka shaqeynayay safaaradaas waxaa marwalba uu kala kulmayay aflagaado iyo handadaad diblumaasiga u qaabilsanaa caafimaadka safaarada Qadar ee Britain.
Ganacsade Soomaaliyeed Oo Goordhow Lagu Dilay Magaalada Pretoria
Waxaa Goordhow kooxo burcad Koonfur Afrikan ah gudaha wadankaas ay ku dileen Muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa dadka ganacsiga ku leh dalkaas.
Dad ku sugan Koonfur Afrika ayaa waxa ay sheegeen in dilka uu ka dhacay Xafadda Mamelodi oo hoos tegta Magaalada Pretoria,isla markaana kooxo hubeysan oo burcad ah ay dhowr xabadood ay la dhaceen Muwaadinka Soomaaliyeed,waxaana xiliga falkan uu ka dhacaayay ku sugnaa halkaasi.
MADAXWEYNE LAFTAGAREEN OO SHALAY GAARAY DEGMADA DIINSOOR EE GOBOLKA BAAY
Warar hoose aan heleyno ayaa sheegaya in Marxuumka lagu magacaabi jiray Cabdifitaax Cali Xoosh,kaasi oo kamid ahaa Ganacsatda Soomaaliyeed ee kunool dalka Koonfur Afrika.
Labda habeen kahor ayey aheyd markii Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Allaha u Naxariistee Xuseen Muxumed Xasan sidaan oo kale loogu dilay Magaalada Cape Town ee Koonfur Afrika.
Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa Sanadkan gudihiisa lagu dilay dhowr qof oo Soomaali ah kana kamid ahaa dadka ganacsiga ku leh dalkaasi,iyadoona weli aysan jirin cid ka hadashay dilalka arxan darada ah ee loo geysanaayo Soomaalida kunool Koonfur Afrika.
RA’IISUL WASAARE KHEYRE OO KULAN LA QAATAY DHALINYARADA MAGAALADA KISMAAYO
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, ayaa magaalada Kismaayo kulan xogwaysi ah kula yeeshay dhallinyarada ku nool magaalada.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo dhallinyarada u sheegay in hoggaanka dalku uu muhiimmad gaar ah siinayo arrimaha dhallinyarada ayaa uga jawaabay su’aalo ay ka waydiiyeen xiri irka dawladda dhexe iyo dawladgobaleed yada, qorshaha amniga, waxba rashada, caafimaadka, doorashooy inka, Shaqoa buurka dhallinyarada, Kobcinta dhaqaa laha, ma algashiga, iyo barnaamijka Caf inta daynta lagu leeyahay dalka.
Dhammaan mas’uuliyiinta dawladda feder aalka iyo dawlad gobaleedyada ay uu sheegay Ra’iisul Wasaaruhu in laga doonayo wada shaqayn buuxda ayna ma s’uuliyadi ka saarantahay u adeegidda bulshada Soomaaliyeed meel waliba oo ay joogaan, isaga oo intaa raaciyay in um madda Soomaaliyeed kula xisaabta mayaan inta ay xilka hayaan waxa ay dhisaan iyo waxa ay qaldaan.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa shee gay in Sugidda amniga ay ku xirantahay hagaajinta dhaqaalaha, siyaasadda, arrim aha bulshada, isaga oo intaa raaciyay in shaqo la’aanta dhalinyarada, musuqa, qa byaaladda, nin jeclaysiga ay qayb ka qaa danayaan amni darrada, loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo hannaankii wax looga qaban lahaa.
Mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhal linyarada uu kulanka la yeeshay u sheeg ay in dawladdu ay dibuhabayn ballaaran ku wado dhaqaalaha, ciidanka qaranka, siyaasadda iyo horuamrinta arrimaha bul shada si loogu guulayso himilada ummad da Soomaaliyeed, loona jeexo waddadii horumarka dalka.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhallinyarada u cadeeyay in hagaajinta mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ay ku xirantahay sida waxbarasho tayo leh dalka looga hirgeliyo, arrintaasna ay dawladdu dadaal badan gelinayso.
DFS OO LA SHEEGAY IN AY SOO DAABAC AN DOONTO SHILLIN SOOMAALI CUSUB
Shabakadda ka faalloota Arrimaha Ganacsiga ee businessdailyafrika.com ayaa qortay inay DFS doonayso inuu hawshaasi u qabto Khabiir fadhigiisu yhaay Nairobi, kaasi oo ay Hay’adda Lacagta Adduunka ee IMF kula heshiisay inuu farsameeyo Lacago cusub oo Shillin Soomaali ah.
Tallaabadan ayaa la sheegay in looga dan leeyahay sid loo helo lacago lagu bedelo Shillin Soomaaliga haatan ee duugoobay.
Somalia wax lacag rasmi ah ma lahayn tan iyo markii ay burburtay Dowladdii dhexe bishii Janaayo ee sannadkii 1991kii.
DFS waxay u sheegtay Kooxda Dibueegista ee Hay’adda Lacagta Adduunka ee IMF oo ay bishii hore kula kulmeen magaalladda Nairobi qorshaha lagu soo daabacayo Shillin Soomalaida cusub, iyadoo la isla eego jadwalshaqo ee arrintaasi, waxaana la magacaabay Guddi gacan ka geysta hawlaha lagu samaynayo Lacagta Cusub.
Shabakadda businessdailyafrika.com waxay qortay inay DFS u sheegtay Hay’adda IMF in loo bahan yahay ilaa 41 million oo Dollar oo lagu fulin lahaa Mashruuca daabacaadda Lacagta cusub ee Somalia.
Wejiga Koowaad ee qorshaha Isbedelka waxay DFS doonaysaa inay arkaan in la soo daabaco 752.5 million oo Lacagta Shillin Soomaaliga ee Xaashida ama Nootka ah, taasi oo lagu beddeli doona Wareegga Shillin Soomaaliga haatan la isticmaalo.
Lacagtan cusub waxay u saamixi doontaa Bangiga Dhexe ee Somalia inuu dhisto Kayd difaac ee Lacagtiisa u gaarka ah iyo in la sameeyo Nidaamka Dhexe ee Lacagbixinta iyo in la xoojiyo Nidaamka Sharciga ee Bangiyadda ka jira dalka.
Si kastaba ha ahaatee, Wejiga Labaad ee Isbedelka Lacagaha waxay Somalia daabacan doontaa Lacag badan oo tayo leh iyo horumarinta Siyaasadda ee Lacagta Madaxabannaan iyo Maaraynta Kaydka Lacagaha dalka Somalia.
WARARKII UGU DAMBEEYAY KOOXO HUBE YSAN OO QOF SHACAB AH KU DILAY MUQDISHO
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kooxo ku hubeysnaa Bastoolado oo habeen hore gudaha Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir ku dilay Nin Shacab ahaa.
Dad goobjoogayaal ah oo hadlay Dalsan ayaa waxa ay u sheegeen in dilkan uu ka dhacay Nawaaxiga Jaamacadda Gaheyr ee ku taalla Degmada Hodan,isla markaana rag hubeysan dhowr xadadood ay uga dhufteen qeybaha sare ee jirka Ninka Shacabka ahaa,kaasi oo xiliga la dilaayay ku sugnaa halkaas.
Sdioo kale waxaa la sheegay in kooxihii ka dambeeyay falkaasi ay ku bax sadeen luuq yar oo ka agdhawaa goobta uu dilka ka dhacay.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Sooma aliya ayaa habeen hore howlgalo ka sameeyay qeyb kamid ah degmada Hodan,kaasi oo lagu raadinaayo ragii fuliyay dilka loo gey stay Ninka la sheegay in uu ahaa Shac ab,hayeeshee weli lagu ma guuleysan in gacanta lagu soo dhigo.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa mudd ooyinkii dambe ku soo batay dilalka qorsheysan oo loo geysanaayo Ciidama dadowlada iyo dadka Shacabka ah,wax aana Mas’uuliyadooda sheegta Alshaba ab.
FAAHFAAHIN KA SOO BAXAYSA MIINO KU QARAXDAY SUUQA DEEGAANKA GOOFGADUUD
Waxaa soo baxaya faahfaahino la xiriira qarax ka dhacay suuq weyn oo ku yaal deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay iyadoo qaraxaasna ay ku dhinteen lix ru ux halka 40 kalana ku dhaawacme en.
Qaraxan oo ka dhacay bartamaha suuq lagu iibiyo xoolaha oo maalinta Arbacada la isugu yimaado ayaa dadka wax ku noqday waxa ay isugu jireen xoolo dhaq ato iyo ganacsato.
Dadka ku dhaawacmay qaraxanayaa la geeyay isbitaalada ku yaal magaalada Baydhabo waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashada ay sii kororto.
Deegaanka Goofgaduud ayaa soddon km dhinaca Waqooyi ka xigaa magaalada Baydhabo waxaana ku sugan ciidamada Maamulka Koofurgalbeed iyadoo hore dhowr jeer ay u soo weerareen dagaala mayaasha AlShabaab.
MAREYKANKA OO SHEEGAY IN UU DUQEYN KU DILAY DAGAALAMAYAAL KA TIRSAN ALSHABAAB
Hadalqoraal oo ka soo baxay Taliska Ciiddanka Maraykanka ka jooga qaaradda Afrika ee AFRICOM ayey ku sheegteen inay 8 Dagaalame oo ka tirsan Alshabaab ku dileen duqeyn Diyaaradeed oo ay bishan 11dii ku qaadeen Deegaanka Darasalaam ee Gobalka Sh/hoose.
AFRICOM waxay sheegtay inay Duqeyntaasi ku taageerayeen Ciiddanka DFS oo iyagu qeyb ka ahaa Hawlgalkaasi, kuwaasi oo weerar kala kulmay Alshabaab.
Taliska Ciiddanka Maraykanka ka jooga qaaradda Afrika ee AFRICOM waxay sheegeen inaysan waxyeello soo gaarin inciiddankoodii ka qeyb galay Hawlgalk aasi.Balse, Dagaalamayaasha Alshabaab ayaa sheegay inay Sarkaal Maraykan ah ku dileen iska horimaadkii ka dhacay Dee gaanka Darasalaam ee G/ Sh/ hoose.
XOG: WAXGARADKA & SIYAASIYIINTA K/GALBEED OO GO’AAMO HALIS AH KA GAARAYA DF HADDII AAN LA SII DEYN MUKHTAAR ROOBOW
Warar hoose oo aan heleyno ayaa sheeg aya in Dowlada Soomaaliya markale laga codsaday inay xabsiga kasii deyso Mu khtaar Roobow Cali Abuu Man suur.
Kulan daraad ka dhacay Magaalada Muq disho ayaa odayaasha iyo siyaasiyi inta Koofur Galbeed waxay ku heshiiyeen Dowlada Federaalka Soomaa liya ay ho rdhigaan Labada Shardi oo kala ah.
In Dowlada ay xabsiga kasii deyso Mukhtaar Roobow ama in Dadka reer Koofur Galbeed ay wada shaqeynta iyo xiriirka Dowlada dhexe ay joojiyaan.
Odayaasha kasoo jeeda Koofur Galbeed ayaa hore Dowlada Federaalka Soomaa liya uga diiday lacago ay dooneysay inay kaga raali galiso rabshadihii ka dhacay Magaalada Baydhabo, iyadoo kadib u balanqaaday in xal laga gaarayo arrinta Mukhtaar Roobow balse wali go’aan lagama gaarin
Dowlada Soomaaliya iyo Mukhtaar Roobow oo xabsiga ugu jira ayaa isku mari la’ shuruudo ay Dowlada hordhigtay Wadaadka waxaana Villa Somalia ay ku xirtay sii deyntiisa inuu kasoo baxo Shuruudo horyaala oo aan la faahfaahin.
FARANSIISKA OO KA CAAWINAYA ETHIOPIA DHISMAHA CIIDAMADA BADDA
Madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa shir jaraa’id oo ay wadajir u qabteen Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu ku sheegay in dowladiisu ay ka caawineyso Ethiopia inay dhisato ciidam ada badda.
Labada dowladood ayaa sidoo kale ku heshiiyay inay yeeshaan ganacsi iyo xiriir wanaagsan, waxana ay dowlada Fa ransiiska ugu deeqday dowlada Ethiopia lacag gaareysa boqol malyan oo Euro.
RA’IISUL WASAARE KHEYRE OO GUDDOOMI YAY SHIR AY KA QEYBGALEEN WASIIRO FED ERAL AH IYO WASIIRADA JUBBALAND
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federa alka Soomaaliya Xasan Cali Khayre, ayaa guddoomiyay shir ay Kisma ayo ku yeesheen wasiirrada ku wehliya socda alkiisa iyo wasiirrada wada shaqayntu kala dhexeyso tirsan dawlad gobaleedka Jubaland.
Shirka Wasiirrada dhex maray oo uu sidoo kale goob joog ka ahaa madaxway naha Jubaland,Axmed Maxamed Islaam, ayaa intiisa badan looga hadlay sidii loo ga gudbi lahaa madmadawga jiray ee ho os u dhigay isku xirnaanta ka dhexeysa la bada dhinac iyo sidii loo abuuri lahaa jawi wada shaqyn buuxda oo fududeeya guda shada waajibaadka madaxda ka saaran u adeegidda ummadda Soomaaliyeed.
Kulanka intii uu socday ayaa lagu heshiiyay in dhammaan la xalliyo caba shadii jirtay iyo in labada dhinac ay yee shaan wada shaqayn buuxda si hannaan wadajir ah loogu adeego bulshada Soo maaliyeed.
Wasiirka qorshaynta xukuumadda fed eraalka Soomaaliya, Jamaaal Maxamed Xasan, ayaa sheegay in wasiirrada fed eraalka iyo wasiirrada Jubaland laga doo nayo in ay dardargeliyaan fulinta qodoba dii kasoo baxay shirkaan oo sidoo kale lo oga hadlay xoojinta Tababararada, iskaa shiga iyo wadashaqaynta shaqaalaha Da wladda.
Socdaalka Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre uu ku joogo magaalada Kis maayo ayaa qorshihiisa ugu wayn waxa uu ahaa in sare loo qaado midnimada, wa dajirka, wada shaqaynta dawladda feder aalka iyo dowlad gobaleedka Juba land. Ra'iis ul Wasaare Kheyre oo gud oomiyay shir
CIIDAMADDA DOWLADDA SOOMAALIYA OO QABTAY SARAAKIIL SHABAAB AHAA+MAGACYO
Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Kuwa Daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanno hoos yimaada degma dda Jammaame ee gobolka Jubbada hoose.
Howlgalladaan oo ahaa kuwa Qorshey san ayaa waxa ay ka dhaceen meel 10 KM u jirta degmada Jammaame, iyaggo ona ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Jubb aland oo is garabsanaya ay jiinka webiga ka galeen deegaanka Yiireey oo aan sid aa uga fogeyn degmada Jammaame.
Tiro ka mid ah Alshabaab ayaa howlgalka lagu khaarajiyay, waxaana nolosha lagu hayaa tiro badan.
Sida ay sheegeen Saraakisha Ciidamada Jubbaland Lix Qof oo Saddex ka mid ah ay ahaayeen Saraakiil sarsare ah ayaa laga diley Shabaab, waxaana nolosha la gu qabtay Seddex Kale.
Saraakiisha la qabtay ayaa lagu kala magacaabaa Cali Waraabe, Tima Jilic iyo Galley, kuwaas oo Shabaab u qaabilsa naa Cabsi gelinta dadweynaha.
Diyaaradaha Mareykanka oo howlgalka qeyb ka ahaa ayaa duqeeyey seddex ga ari oo ay Alshabaab gurmad ahaan u soo direen, waxaana halkaas ku basbeel ay Saanad ciidan iyo raggii la socday.
XARUNTII UGU HOREYSAY EE LAGU DAWE EYO DADKA QABA CUDURKA DHIMIRKA OO LAGA HERGALIYAY MAGAALADA BELEDWEYNE
Xaruntan oo noqoneysa tii ugu horey say ee nooceeda ah laguna daweeyo dad ka qaba xannuunka dhimirka ayaa laga hergaliyay qeyb ka mid ah Isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne
Axmed Maxamed Shire oo ah Dhakht arka kaliya ee ilaa hadda ka howlgala xar unta oo la hadlay HOL ayaa sheegay in Drs Faadumo Cali Jimcaale oo ku taqa sustay cudurrada ku dhaca dhimirka aheyd maskaxdii ka danbeysay in la helo xarun u gaara dadkan oo intooda badan aan helin daweyntii iyo xannaanadii ay u baahnaayeen.
''Markii ugu horeysay Drs Faadumo Cali Jimcaale waxaa ay socdaalkeedii ugu horeeyay ku timid magaalada Beledweyne bishii January 2018, laakiin waxaa ay soo laabatay isla sanadkaas November 2018 oo ay la kulantay qaar ka mid ah dadka qaba xannuunka dhimirka, xiligaa wixii ka danbeeyay waxaa soo baxday baahida loo qabo in la helo xarun lagu xanaaneeyo bukaannadan '' ayuu yiri Dakhtar Shire.
GUDDOOMIYE MURSAL OO SHALAY DALKA DIB UGU SOO LAABTAY
Magaalada Muqdisho ayaa Shalay waxa dib ugu soo laabtay wafdi uu hogaa min ayo Guddoomiyaha Golaha Shacabka Ba arlamaanka Federaalka Soomaaliya Max amed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maalmihii la soo dhaafay Safar shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa.
Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho ayaa waxaa Guddoomiye Mursal uga hortegay oo kusoo dhawe ey ay Xildhibaano ka tirsan Golaha Shac abka, Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha shacabka Mahad Cabdalla Ca wad iyo xubno kale oo ka tirsan dowlada Fedrraalka.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxa med Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maalmihii la soo dhaafay Safar shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa gaar ahaan dalalka Turkiga iyo Jordan,isagoo halkaas kulamo kula soo qaatay Madax ka tirsan dalalkii uu tegay.
ALSHABAAB OO SANADKAN OO KALIYA DUQEYMO LOOGA DILAY 244 DAGAALYAHAN
Taliska Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in sanadkan oo kaliya 25 duqeymo cirka oo ay ka geysteen Soomaaliya Alshabaab looga dilay 244 dagaalyahan.
Waxaa ugu danbeeyay weerar daraad Mareykanku ka geysteen deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose oo talisku sheegay in ay ku dileen 8 ka tirsan dagaalyahannada Alshabaab, iyaga oo meesha ka saaray in dhinacooda wax khasaare ah oo uu soo gaaray.
Duqeymihii ugu danbeeyay ee diyaaradaha Mareykanku geystaan ayaa sidoo kale ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan oo lagu dilay diro ka badan 50 xubnood oo ka tirsanaa Alshabaab.
Mareykanka waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo iyo saraakiisha militari oo gacan ka siiya dowladda Soomaaliya dagaalka ka dhanka ah Alshabaab, sanadihii ugu danbeeyayna waxaa ay xoojiyeen duqeymaha lagu bartilmaameedsado xarumaha ay degan yihiin xoogagga iyo saraakiisha Ururkan dagaal kula jira dowladda Soomaaliya iyo ciidamada taageeera.
FAATAXADA IIGU SOO AQRIYA !!!.
Xanuun adag ayuu la il daran yahay.
Walaalayaakoow, Faataxada iigu Soo Aqriya una duceeya, waa mid aan aad u jecalahay, inta haddana qalbigeeyga Ku jiro, waxaan jecelahay in aan arko isaga oo Ka bogsaday xanuunka hayo.
Isbitaala badan ayaan geeynay, Dhakhatiir badan ayaa isku dayay in ey ogaadaan xanuunka hayo, waana la fahmi waayay Cudurka hayo.
Hadda waxaa uu Ku jiraa Isbitaal kale qey bta Gargaarka deg dega ah (ICU), baaritaan kale ayaa lagu hayaa. ( F.S: 1aad)
Walaalayaaloow, iigu Soo duceeya DALKEEYGA, in Cudurka hayo Alle Ka bogsiiyo, Kaniini & Cirbado badan waan Kala daalnay, Xanuun ayuu Ka sii qaaday ( F.S: 2 &3aad).
Walaalayaaloow, iigu Soo duceeya in Dal keeyga Alle ii caafiyo. Irid ALLA laga ma quusto, in Ducadaada ALLA Aqbalo oo Saacatul ijaabo ey tahay ayaa dhici karto.
Dalka iigu Soo Duceey. Ha quusan, duca dana haka bakhiilin.. Aamiin, Aamiin, Aamiin.
Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya Saaxiibadooda Soomaaliya ay 12 Bishaan duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen deegaanka Huley oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose,isla markaana ay la beegsadeen saldhigyo ay lahaayeen Shabaab.
Mareykanka ayaa sanadkaan 2019 waxa uu kordhiyey weerarada dhinaca cirka ah uu ka fuliyo Soomaaliya, waxaana horantii todobaadkaan weerar dhinaca cirka ah uu ku qaaday deegaanka DaaruSalaam ee gobolka Shabeellaha hoose.
QIIMAYNTA CIYAARTOYDA LIVERPOOL & BAYERN MUNICH EE KULANKII AY REDS TAARIIKHDA KU SOO SAMAYSAY, XIDIGIHII WACDARAHA DHIGAY IYO KUWII CEEBTA KALA BAXAY ALLIANZ ARENA.
Liverpool ayaa sare u sii qaatay habeenada taariikhiga ah ee ay ku leedahay tartanka UEFA Champions league kadib markii ay Allianz Arena ku reebtay kooxda Bayern Munich oo waliba garoonkeeda rekoodh waqti dheer ah ku soo haysatay.
Liverpool ayaa soo gaba gabaysay rajadii Bayern Munich ee UEFA Champions league kaas oo ay siddeed dhamaadkiisa u soo baxaysay tan iyo wixii ka danbeeyay xili ciyaareedkii 2010-11 laakiin wiilasha Jurgen Klopp ayaa wacdaro layaableh soo dhigay.
Sadio Mane ayaa laba gool dhaliyay halka Virgil Van Dijk uu Reds u saxiixay goolkii labaad oo muhiimad khaas ah u lahaa laakiin Joel Matip ayaa noqday xidigii afraad oo kaliya ee Liverpool u soo ciyaaray kaas oo tartanka UEFA Champions league goolal iskaga dhaliay waxaana uga horeeyay Sami Hyypia (2007), John Arne Riise (2008) iyo James Milner (2018).
Dhibaatadii uu Joel Matip kula kulmi lahaa goolka uu iska dhaliyay waxaa ka asturay joog dheere Virgil Van Dijk oo goolka labaad Liverpool hogaanka ugu soo celiyay halka Mane uu ahaa xidiga dilay rajadii Bayern Munich.
Haddaba qiimayntii ciyaartoyda labada kooxood oo aanu halkan idiinku soo gudbinayno ayaa sharaxaad ka bixinaysa sidii ay ciyaartoyda labada kooxood u kala fiicnaayeen.
XIDIGII GAROONKA: Sadio Mane ayaa noqday xidigii garoonka ugu fiicnaa kadib markii uu sameeyay qaab ciyaareed cajiib ah iyo waliba dhamaystir fiican wuxuuna goolkii furitaanka ku dhaliyay qaab muujinaya tayadiisa sare halka goolkii saddexaad uu ahaa mid madax ah oo uu Hummels ku garaacay.
Sadio Mane ayaa heer kale u qaaday gool dhalintiisa Liverpool isaga oo waliba boqolkiiba 69% yeeshay goolashii ay Liverpool ka soo dhalisay wareegyada bug baxa ee UEFA Champions league.
Marka laga yimaado Sadio Mane waxaa bandhig cajiib ah sameeyay Van Dijk kaas oo muujiyay in uu yahay deganaanta, ruuxda iyo aragtida difaaca Liverpool wuxuuna cagaha dhulka ugu hayay Joel Matip uu yara did sanaa isla markaana mararka qaar hawada ka yara baxayay.
Jordan Henderson oo xili horeba dhaawac ku baxay ayaan qiimayn fiican kulankan ka helin laakiin xidigii booskiisa buuxiyay ee Fabinho ayaa qiimayn fiican helay maadaama oo uu wax badan ku soo kordhiyay khadka dhexe ee Liverpool.
Djinaca Bayern Munich waxay la kulmeen fashil wayn waxaana ugu qiimayn liita Hummels oo sabab u ahaa labadii gool ee Van Dij iyo Mane ee qaybtii labaad halka goolhaye Neueer, Rafinha, Sule, Thiago, Ribery, James iyo Lewy ay dhamaan qiimayn liidata heleen.
Halkan kaga bogo Qiimaynta kooxaha Liverpool iyo Bayern Munich:
Bayern Munich: Neuer (5), Rafinha (5), Sule (5), Hummels (4), Alaba (6), Thiago (5), Martinez (6), Ribery (5), Rodriguez (5), Gnabry (6), Lewandowski (5)
Badalkii: Coman (5), Goretzka (5), Sanches (5)
Badalkii: Fabinho (7), Lallana (5), Origi (5
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa habeen hore bandhig cajiib ah kala soo hor muuqday kulankii kooxda Lyon wuxuuna door wayn ka qaatay in kooxda Valverde ay taariikh badan ka heshay kulankii Camp Nou. Guud ahaan waxaa jiray laba rekoodh oo khaas u ahaa Barcelona oo laga diwaan galiyay kulankan laakiin Messi laftiisa waxaa loo diwaan galiyay xog kale oo cajiib ah.